स्वर्गीय पिताजीका नाममा- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
स्विडिस फिल्मकार इङ्गमार बर्गम्यान भन्छन्, ‘उम्बर्टो डी मैले सयौं पल्ट प्रेमपूर्वक हेरेको छु । संसारका विषय उघारिँदै गए सारा फिल्महरुमा मेरो पहिलो रोजाइको फिल्म यही हो ।’ टाइम साप्ताहिकले सन् २००५ मा यसलाई संसारका सर्वकालीन १०० महान् फिल्मको सूचीमा राखेको छ ।
आश्विन ३, २०७७ अभय श्रेष्ठ
इटालीका निर्देशक भितोरियो डेसिकाले आफ्नो फिल्म ‘उम्बर्टो डी’ मा संसारभरिका सारा वृद्ध पिताहरूको संघर्ष र संवेदनाको कथा टपक्क टिपेका छन् । कताकता त्यसमा म आफ्नै पिताजीको विरही जीवनको एउटा झाँकी भेट्छु ।
सिनेमाको दुःखी पात्र उम्बर्टो डी फेरारीजस्तै मेरा बाको जीवन पनि बाध्यता, विपत्ति, धैर्य, दुर्घटना, प्रतिदानरहित प्रेम र संघर्षको सङ्ग्रहालय थियो । तथापि उहाँ कहिल्यै दुःखी हुनुभएन । न कुनै कुरामा उहाँको गुनासो थियो । निरन्तर नियतिको प्रहार र ताडनाले उहाँ ४० वर्षको उमेरमै मुटुको दीर्घरोगी हुनुभयो । त्यसपछि नै उहाँको जीवन फेरारीको जस्तै एक्लोपनको विरहमा धकेलिन सुरु भयो । तर, संघर्ष त बाँचुन्जेल गर्नु नै थियो !
डेसिकाले यो फिल्म आफ्नै पितालाई समर्पण गरेका छन् । खासमा, उनलाई संसारभरि चिनाउने कालजयी फिल्म थियो, ‘द बाइसाइकल थिभ्स’, जसको प्रभावमा भारत र संसारभरि ‘समानान्तर सिनेमा’को लहर चल्यो । तर, विश्वका थुप्रै महान् फिल्मकारले डेसिकाको उत्कृष्ट मानेको फिल्म हो, ‘उम्बर्टो डी’ । महान् स्विडिस फिल्मकार इङ्गमार बर्गम्यान भन्छन्, ‘उम्बर्टो डी मैले सयौंपल्ट प्रेमपूर्वक हेरेको छु । संसारका सारा फिल्महरूमा मेरो पहिलो रोजाइको फिल्म यही हो ।’ टाइम साप्ताहिकले सन् २००५ मा यसलाई संसारका सर्वकालीन १०० महान् फिल्मको सूचीमा राखेको छ । सन् १९५२ मा पहिलोपल्ट इटालीमा रिलिज हुँदा यो फिल्म व्यावसायिक रूपले पूरै असफल भयो । तर, चाँडै नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अपार लोकप्रिय भयो । यसले थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म उत्सवहरूमा पुरस्कार, मनोनयन र प्रशंसा पायो । पछि एक अन्तर्वार्तामा डेसिकाले आफ्ना कृतिमा सबैभन्दा गर्व गर्नलायक यसै फिल्मलाई मानेका थिए ।
म्याक्सिम गोर्कीको एउटा विश्वप्रसिद्ध कथा छ, बुढी इजरगिल । त्यसभित्रकै उपकथाको जाज्वल्यमान् पात्र दान्को आफ्नै मुटुलाई लालटिनझैँ बालेर बैगुनी गाउँलेहरूलाई अन्धकार जंगलको बाटो पार गराउँछ । अन्धकार सकिनेबित्तिकै मुटु भुइँमा खसेर चकनाचुर हुन्छ र त्यहीँ उसको मृत्यु हुन्छ । ‘उम्बर्टो डी’ आदर्शहरूका खातिर गरिने त्यस्तो महान् आत्मबलिदानको कथा त होइन । यो ‘युवाहरूको गीत’ की नायिका लिन ताओ चिङको जस्तो देशभक्तिपूर्ण लडाइँको कथा पनि होइन । मिहिन रूपमै सही, यसले अवसादबाट जीवनतिर फर्कन जगाउने आशा भने उस्तै छ । यो, दोस्रो विश्वयुद्धपछि
सङ्क्रमणकालीन इटालीमा सर्वसाधारणको अत्यन्त कष्टकर जीवनको अथक संघर्षको कथा हो । यसको खलनायक नै इटालीको तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक सत्ता हो । घरबेटी एन्टोनियो बेलोनी त्यही सत्ताको क्रूर प्रतिनिधि हो । रोम सहरको यस्तो क्रूर समाजमा वृद्ध पेन्सनर उम्बर्टो र घरबेटीकी तरुनी कामदार मारियाजस्ता जनसाधारणले सादा जीवनका लागि असाधारण सङ्घर्ष गर्नुपरेको कथा हो यो । पेन्सन वृद्धिको माग गर्दै सरकारविरुद्ध गरिएको प्रदर्शनीबाट फर्कंदा वृद्ध उम्बर्टो आफ्नो कोठामा एक जोडी तरुनी–तन्नेरी रासलीलामा मस्तराम भेट्छ । उसको अनुमतिबिना त्यो कोठा एक घण्टाका लागि घरबेटीले तिनीहरूलाई भाडामा दिएकी हुन्छे । पिता समानका वृद्धको आत्मसम्मानमाथि छोरी समानकी महिलाले गरेको यो प्रहार पुँजीवादी युगको आगमनसँगै संवेदनाको हत्याको संकेत हो । वृद्धले घरभाडाबापत उसलाई १५ हजार लिरा तिर्न बाँकी हुन्छ । महिनाको अन्त्यसम्म तिर्न नसके उसलाई गलहत्याउने धम्की दिइएको हुन्छ ।
तीस वर्षसम्म सामाजिक गतिविधि मन्त्रालयमा काम गरेको उम्बर्टोलाई युद्धले क्षतिग्रस्त इटालीले दिने पेन्सन कति न्यून र अनियमित हुन्छ भने त्यसले हातमुख जोर्न र डेरा भाडा तिर्नै पुग्दैन । यता, विधवा घरबेटी एन्टोनियो अद्बैंसे उमेरमा कसैको प्रेममा फसेकी हुन्छे र उसैसँग बिहे गर्न चाहन्छे । त्यसका लागि ऊ तीस वर्षदेखि यही घरमा बस्दै आएको बिरामी वृद्धको कोठा गाभेर ठूलो बैठककोठा बनाउन चाहन्छे । सत्तरी नाघेको बिरामी वृद्ध झिटीगुन्टा बोकेर कहाँ जाने ?
उसले आफूसँग भएको सिरीखुरी गर्दा, घडी र किताब बेच्दा पनि ऋणको एक तिहाइ मात्र जम्मा हुन्छ । घरबेटी यो आंशिक रकम तिरस्कारपूर्वक फर्काइदिन्छे । ऊ साथीभाइसँग ऋण खोज्छ । कसैले पत्याउँदैन । बाटोमा हात थापेर माग्ने कोसिस गर्छ, मध्यमवर्गीय अभिमानले दिँदैन । त्यही तनावले ज्वरो र टन्सिल भएपछि ऊ अस्पताल भर्ना हुन्छ । घरबेटीकी कामदार मारिया ऊप्रति अत्यन्त हार्दिक छे । मालिक्नीका आँखा छलेर ऊ वृद्धलाई खानेकुरा दिन्छे । तातोपानी, थर्मामिटर दिएर सघाउँछे । वर्गीय प्रेम भनेको सायद यही हो । तर, उसका पनि चिरन्तन दुःखहरू छन् । ऊ तीन महिनाकी गर्भवती छे । दुई प्रेमीमध्ये गर्भमा रहेको बच्चा कसको हो, उसलाई थाहा छैन । नेपल्स र फ्लोरेन्सका दुवै प्रेमी उसको गर्भ स्विकार्न तयार छैनन् । घरबेटीले थाहा पाएपछि ऊ पनि निकालिन्छे र सडकमा पुग्छे । किनभने उसको जाने ठाउँ कतै छैन । गाउँमा बाबुको क्रूरताबाट बच्नै सहर आएकी ऊ अब घर फर्कन पनि सक्दिन ।
उपचारपछि डेरा फर्कंदा उम्बर्टोलाई एकसाथ दुइटा तनाव हुन्छ । एक, फ्लाइक नामक सानो कुकुरबाहेक उम्बर्टोको आफ्नो भन्नु कोही हुँदैन । अस्पताल जाँदा उसले त्यसको हेरचाह गर्न मारियालाई अह्राएको हुन्छ । मारिया काममा व्यस्त हुँदा मालिक्नीले त्यसलाई छाडिदिन्छे । कुकुर उसको खोजीमा कतै हराउँछ । दुई, उसका सामानहरू लथालिङ्ग पारेर कोठाको भित्ता भत्काई ठूलो बैठक कोठा बनाउन घरबेटीले रङरोगन गराइरहेकी हुन्छे । छाडा ठानेर नगरपालिकाले मार्नै लाग्दा संयोगले भेटेर उम्बर्टो आफ्नो प्राणप्रिय कुकुरलाई फिर्ता ल्याउँछ । तर, आत्मसम्मानमाथिको प्रहार खपेर कतिन्जेल यहाँ बसिरहने ? उम्बर्टो मारियालाई खबर गरेर त्यही रात फ्लाइकसँगै घर छाडेर निस्कन्छ ।
फ्लाइक नभएको भए सायद ऊ संसारबाट ऊबेलै बिदा भइसक्थ्यो । ऊ फ्लाइकलाई कसैको जिम्मा लगाएर हिँड्न चाहन्छ । कोही भेटिँदैन । अन्ततः फ्लाइकलाई लिएरै रेलको लिकमा बसेर आत्महत्या गर्न खोज्छ । तर, कुकुरले नै उसको ज्यान बचाउँछ र जीवनप्रति महत्त्वबोध गराउँछ । उम्बर्टो छानाविहीन, शरणविहीन र पैसाविहीन भएर पार्कमा फ्लाइकसँग खेलिरहन्छ । बाँकी जीवनका लागि त फेरि पनि संघर्ष गर्नु नै छ ∕ संघर्ष छ र त जीवन छ । जीवन छ र त संघर्ष पनि छ ।
साक्षी भावसंसार हल्लाएको यति मार्मिक, यति लयदार, यति जैविक र यति कालजयी फिल्म हेर्न पाउँदा यो ६८ वर्ष पुरानो फिल्म हो भन्ने कतै लाग्दैन । डेसिकाको क्यामेरा साक्षी भावको उत्कृष्ट नमुना हो । त्यसले कुनै नक्कलझक्कल गर्दैन । सिजर जाभात्तिनीसँग मिलेर डेसिकाले लेखेको पटकथाको उत्कृष्टता तिनै प्रसङ्गबाट साबित हुन्छ जहाँ दृश्यमा नदेखाई कतिपय उपकथा छर्लङ्ग हुन्छ । मारिया बारम्बार उम्बर्टोलाई झ्यालबाट तल सडकमा उभिरहेका आफ्ना दुई प्रेमीलाई देखाउँछे । अरूले जस्तो डेसिका तिनलाई क्लोजअप गरेर देखाउँदैनन् । तल सडकका मान्छेलाई झ्यालबाट जति देखिने हो, त्यति मात्र देखाउँछन् । मारिया नेपल्सको प्रेमीलाई नै आफ्नो बच्चाको बाबु हो भन्ने अनुमान गर्छे । त्यसकारण उम्बर्टो पनि डेरा छाडेर जान लाग्दा उसलाई नेपल्सको सिपाहीलाई छाड्नू भनेर सुझाव दिन्छ । एकपल्ट मात्र नेपल्सवाला प्रेमीसँग मारियाले आफू गर्भवती भएको रुँदै बताएको दृश्य देखाइन्छ । ऊ मारियाको गुनासो सुन्दैन । उम्बर्टोले सोधपुछ गर्दा पनि खासै चासो दिँदैन । तर, फ्लोरेन्सवाला प्रेमीलाई लङ सटबाट बाहेक नजिकबाट देखाइन्न । तैपनि, मारियाका यी दुवै प्रेमी दर्शकका दिमागमा चक्कर लगाइरहन्छन् ।
डेसिकाले सोफिया लारेन, मार्सेलो मायस्त्रोनीजस्ता विश्वविख्यात कलाकारबाहेक आफ्ना फिल्ममा बिरलै व्यावसायिक कलाकारलाई अभिनय गर्न लगाए । उनले लेखेका छन्, ‘फिल्मका लागि उपयुक्त पात्र नभेटुन्जेल म आफ्नो मनका आँखा घुमाइरहन्छु ।’ धेरै प्रयासपछि उम्बर्टोको भूमिकाका लागि उनले ७० वर्षे वृद्ध प्राध्यापक कार्लोस बत्तिस्तीलाई भेटे जसका आँखामा वेदनापूर्ण आत्मसम्मानको भाव थियो । उनी भन्छन्, ‘त्यसअघि रोम, नेपल्स र अन्य सहरमा म कैयन् दिन, कैयन् घन्टा यस्तो वृद्ध पेन्सनरको खोजीमा भौतारिरहेँ ।’
फिल्म सकिँदा उम्बर्टोको हालत कताकता दस्तोएब्स्कीको समाजले मुर्ख मानेको असल पात्र प्रिन्स मिस्किनकै जस्तो लाग्छ । तर, उम्बर्टो जीवनप्रति आशाको दियो जगाउँछ र सबै दुःख बिर्सेर पार्कमा फ्लाइकसँग खेलिरहन्छ । यस फिल्मको चर्चा गर्दा मैले मेरा बालाई सम्झनुको कारण पनि यही आशाको झिल्को हो जुन जीवनको अन्तिम घडीसम्मै उहाँले त्याग्नुभएन । आत्मसम्मान नगुमाई आउने सारा दुर्भाग्यलाई जित्न उम्बर्टोजस्ता सबैले अभ्यन्तर र नैतिक बल उँचो राख्नु जरुरी हुन्छ । जीवनवादी गायक बब मार्ले यस्तै परिस्थितिका मान्छेलाई प्रेरणा दिँदै आफ्नो चर्चित गीतमा भन्छन्, ‘गेट अप, स्ट्यान्ड अप एन्ड डोन्ट गिभ अप योर फाइट ।’
प्रकाशित : आश्विन ३, २०७७ ११:३३
देवी र मुक्ति
फाल्गुन २४, २०७६ अभय श्रेष्ठ
तिनको चिर इच्छाविपरीत,माथिबाट मायाको भिक्षादान गर्दै उनीहरुले भने, ‘साँचिराख्नू अञ्जुलीमा यो मायाको सरोवर ! देवी, नदीको पानीझैँ यसलाई बग्न नदिनू !’
उनीहरुको सारा क्रूरतालाई भुलेर
अनि बर्साइदिइन् तिनले पनि माफी र मायाको झरना
र, फेरि उनीहरुले भने, ‘कति विशाल तिम्रो हृदय !
देवी, त्यसले नै यो धरती र आकाश ढाकिदिनू ।’
जसरी बेरिन्छ थााक्रामा लहरा
ठीक त्यसरी नै
बेरिदिइन् तिनले आफूलाई
उनीहरुकै मायाको गलबन्दीमा
जवाफमा उनीहरुले भने,
‘पुज्न पाऊँ सधैं तिम्रो शक्ति !
देवी, छाडेर हामीलाई तिमी कतै नजानू ।’
साँझको बतासजस्तो ऊर्जाशील
तिनको दिमाग ।
यसरी नै बाँधिए
चराका पखेटाजस्ता उन्मुक्त
तिनका हातपाउहरु ।
फेरि उनीहरुले तिनको महान् सौन्दर्यको गीत गाए
र, तिनलाई द्रौपदी बनाए ।
मान्यजनले तिनको महान् पतिव्रतको भजन गाए
र, व्यभिचारी पतिहरुले लिए अग्निपरीक्षा
यसरी तिनी पवित्र सीता भइन् ।
कविहरु, जसले तिनको दूधको धाराको महाकाव्य लेखे
र, तिनको जिब्रो थुते
लुकाएर सिङ्गै ब्रहृमाण्डको बोझ
अनि राखिदिए तिनको शिरमाथि
तर, निष्ठुरी छोराहरुले तिनको नामबाट
देशको दस्ताबेजमा लेखाउन आफ्नो नाम
गरिदिए सर्वथा अस्वीकार ।
तिनले केवल मौन भाषाको सङ्गीत सुनिन्
पार गरेर अग्निपरीक्षा
चुपचाप लिइन् भूमि समाधि
अथवा निरीह ढेगनीदेवीझैँ
बोक्सी भइन् र मारिइन्
यसरी उपाख्यानहरुमा तिनी महान् भइन् ।
शिवजीको धनुषझौ नुहिसक्यो तिनको मेरूदण्ड
कहीा त तिनले बिसाउनैपर्छ यो महानताको भारी
जसरी ‘आकाश देखाइरहेको तर्जनी चन्द्रमा हुँदैन’
उसरी नै सीधा पाएको मुक्ति मुक्ति हुँदैन
तेज धारको नदीले सीमा भत्काएझैँ
यो महानताको लेखामा जब गर्नेछिन्
स्वयं तिनले सारा बेरूजुको हिसाब–किताब
तब नै इतिहासको सबभन्दा ठूलो ठगी
पर्ने छ एक दिन पक्राउ
र, तिनको महान् हृदयको ग्राफ झर्नेछ एकाएक शून्यमा ।
त्यसपछि नै देवीबाट तिनी हुनेछिन्
र, दिनको चौडा आयतनमा आकाश खुलेझैँ
खोलिनेछ तिनको दिमागमा
ठोकिएको नेल बिस्तारै ।
प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७६ १३:३९